Home Wararka Ciyaaraha Barcelona oo booska Jordi Alba ka dhigeyso xidig hore uga tegay oo...
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo daafaca bidix ee Benfica Alejandro Grimaldo Daafaca ayaa noqday mid ka mid ah daafacyada ugu fiican ee Primeira Liga tan iyo markii uu ku soo biiray Benfica sanadkii 2015.
Sida laga soo xigtay AS, Barcelona waxay raadineysaa inay dib ula soo saxiixato Alejandro Grimaldo madaama ay doonayaan inay ku bedelaan Jordi Alba waana mid mudada dheer buuxin karo booskaas Alejandro Grimaldo wuxuu afar sano la qaatay akadeemiyada La Masia ee Barcelona iyo seddex sano oo uu la joogay Barcelona B ka hor inta uusan ku biirin Benfica.
Grimaldo wuxuu ku dhibtooday inuu ku biiro line-upka kooxda reer Portugal labadii xilli ciyaareed ee ugu horeysay Wuxuu xubin joogto ah ka ahaa Benfica bilowgiisii intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2017-18. Tan iyo markaas wuxuu dhaliyay 13 gool wuxuuna bixiyay 41 caawin oo cajiib ah in ka badan 200 oo kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan.
Grimaldo wuxuu soo afjaray ololihii 2020-21 isagoo toban caawin u sameeyay Benfica, taasoo ka dhigtay inuu noqdo kooxda wadajirka ugu hal abuurka badan isaga iyo Darwin Nunez Benfica ayaa lagu soo waramayaa inay u furan yihiin iibinta Grimaldo waxayna raadinayaan dalabyo gaarayo 22 milyan oo euro oo loogu talagalay 25 jirka.
Barcelona ayaa doonaya inay la soo wareegaan daafaca bidix oo cusub xagaagan si ay u bixiyaan tartan iyo taageero ay u helaan Jordi Alba halka Junior Firpo uu u muuqda inuu kooxda ka tagayo xagaagan ka dib markii uu ku guul darreystay inuu soo jiito Ronald Koeman Daafacii hore ee Real Betis ayaa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqo Arsenal bilihii ugu dambeeyay.
Previous articleRaphael Varane oo wili go,aan ka gaarin Mustaqbalkiisa Kooxda Real madrid.
Next articleManchester United oo ku dhow inay dhameystirto heshiis 75 milyan ginni ah oo ay kula soo wareegeyso Jadon Sancho.